Volkswagen ကအန်းဒရွိုက်ကား DVD, Volkswagen ကအန်းဒရွိုက် 4.4 ကား DVD, Volkswagen ကအန်းဒရွိုက် 5.1 ကား DVD ၏တရုတ်ထုတ်လုပ်သူ
ဖေါ်ပြချက်:Volkswagen ကအန်းဒရွိုက်ကား DVD ,Volkswagen ကအန်းဒရွိုက် 4.4 ကား DVD,Volkswagen ကအန်းဒရွိုက် 5.1 ကား DVD ,Volkswagen ကအန်းဒရွိုက် 6.0.1 မော်တော်ကား DVD,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Volkswagen ကအန်းဒရွိုက်ကား DVD
Volkswagen ကအန်းဒရွိုက်ကား DVD ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Volkswagen ကအန်းဒရွိုက်ကား DVD , Volkswagen ကအန်းဒရွိုက် 4.4 ကား DVD ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Volkswagen ကအန်းဒရွိုက် 5.1 ကား DVD R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
VW Golf72013 အတွက်ကားအသံ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
TOUAREG android 8 ကားမာလ်တီမီဒီယာစနစ်များ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Magotan 2017 အတွက် Android9ကားခေါင်းစီး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
PASSAT 2014 အဘို့အကားရေဒီယိုစနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Golf72015 အတွက်ကားအသံစနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
SAGITAR 2016 အတွက် android car dvd player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Passat B5 အတွက် Volkswagen android ကား DVD ကစားစက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Tiguan / Touran အတွက် PX5 android ကား DVD ရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
VW universal အတွက် Android 9.0 car dvd player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
VW universal အတွက် Android9ကားရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Jetta 2013 အတွက် Android car dvd gps player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Golf CC အတွက် Android system dvd radio  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
VW Santana 2013+ အတွက် Android ကား DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
VW MULTIVAN 2008-2012 အတွက် Android ကား DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
VW TOUAREG 2010-2014 အတွက် Android carplay အလိုအလျောက်သွားလာမှု  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
TOUAREG 2015 2016 အတွက် Android 9.0 In-dash dvd  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
PASSAT 2015 အတွက် Android ကားစတီရီယိုဘလူးတုစက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Golf7အတွက် Android system dvd gps  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
VW တစ်လောကလုံးအတွက်ကားမာလ်တီမီဒီယာအညွှန်းစနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
VW Golf72013 အတွက်ကားအသံ
Ford Mondeo AT / MT 2007-2010 အတွက် Android 9/10 PX5 octa core ကားစတီရီယို ၁။ Car navigation သည် GPS Navigation ကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်။ Google မြေပုံကိုကြိုတင်တပ်ဆင်သည် (အော့ဖ်လိုင်းမြေပုံအချက်အလက်မပါဘဲ) ။ ၂) WIFI (WIFI modem တွင်ထည့်သွင်းထားသည်) / 4G...
TOUAREG android 8 ကားမာလ်တီမီဒီယာစနစ်များ
TOUAREG android 8 ကားမာလ်တီမီဒီယာစနစ်များ 1.Steering wheel control plug ကိုအဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့်သင်သည်ရှေ့သို့တိုက်ရိုက်အာရုံစူးစိုက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကားမောင်းခြင်းကိုပိုမိုလုံခြုံစေပြီး TOUAREG android 8...
Magotan 2017 အတွက် Android9ကားခေါင်းစီး
Magotan 2016-2017 အတွက် Android9ကားခေါင်းစီးများ Octa-core ပရိုဆက်ဆာ၊ 4G RAM နှင့် 32G ROM တို့ပါရှိသောနောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 စနစ်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ထိပ်တန်း Android Car DVD ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့် Klyde သည်ရုရှား၊ တူရကီ၊ GCC...
PASSAT 2014 အဘို့အကားရေဒီယိုစနစ်
PASSAT 2013 - 2014 အတွက်ကားရေဒီယိုစနစ် PASSAT အတွက် Klyde overhead dvd player သည်သင်၏ဂီတနှင့်ဗွီဒီယိုအရင်းအမြစ်များကိုရရှိရန် USB drive၊ micro SD ကဒ်၊ BT စသည့်လမ်းကြောင်းများစွာကိုထောက်ပံ့သည်။ ထို့အပြင်၊ သင်အကြိုက်ဆုံးအသံနှင့်ဗွီဒီယိုအက်ပ်များကို...
Golf72015 အတွက်ကားအသံစနစ်
Golf72015 အတွက်ကားအသံစနစ် ခရီးတစ်လျှောက်ကားမောင်းနေစဉ်ပျင်းနေသလား။ Klyde Golf72015 head unit သည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသောခရီးသွားဖော်ဖြစ်ပြီးသင်၏လမ်းခရီးများအတွက်အကောင်းဆုံးအသံနှင့်အမြင်အာရုံခံစားမှုကိုပေးစွမ်းသည်။ ဒီ Golf72015 head unit...
SAGITAR 2016 အတွက် android car dvd player
SAGITAR 2015-2016 အတွက် android ကား DVD ကစားစက် တရုတ်နိုင်ငံ၏ထိပ်တန်း Android Car DVD ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်၊ Klyde သည်ရုရှား၊ တူရကီ၊ GCC နိုင်ငံများကဲ့သို့သောနိုင်ငံများစွာတွင်နာမည်ကောင်းရှိသည်။ ဤတွင် SAGITAR အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းရဆုံး...
VW Universal အတွက် Klyde ကားဒိုင်ခွက်လမ်းညွှန်စနစ် Klyde VW Universal Vehicle Gps Navigation သည် Octa-Core ပရိုဆက်ဆာဖြင့်ရေဒီယိုသတင်းနှင့်မိုးလေဝသသတင်းများ၊ သီချင်းများဖွင့်ခြင်းနှင့် APPs...
universal အတွက် dash gps unit များတွင် Android 10 ဤ VW Universal android car GPS စနစ်ရှိသင်၏ဖုန်း၏အွန်လိုင်း GPS ကိုထင်ဟပ်ပြသခြင်းသည်သွားလာရင်းရှုထောင့်ကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာကြည့်ရှုရန်အတွက်ဤလုပ်ဆောင်မှုသည်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ Android ဖုန်းအတွက် USB...
Passat B5 အတွက် Android ကား DVD player သဟဇာတ အောက်ပါမော်တော်ယာဉ်များအတွက် 100% fit: Passat B5 / ဂေါက်သီး4/ ပိုလို / Bora / Jetta / Sharan / T5...
PX5 android ကား DVD ရေဒီယို Magotan / Caddy / Passat / Sagitar / Tiguan / Touran / Jetta / ထိုင်ခုံ / CC ကို / ပိုလို ဂေါက်သီး / ဂေါက်သီး5/ ဂေါက်သီး ၆...
VW universal အတွက် Android 9.0 car dvd player Magotan / Caddy / Passat / Sagitar / Tiguan / Touran / Jetta / ထိုင်ခုံ / CC ကို / ပိုလို ဂေါက်သီး / ဂေါက်သီး5/ ဂေါက်သီး ၆...
VW universal အတွက် Android9ကားရေဒီယို Magotan / Caddy / Passat / Sagitar / Tiguan / Touran / Jetta / ထိုင်ခုံ / CC ကို / ပိုလို ဂေါက်သီး / ဂေါက်သီး5/ ဂေါက်သီး ၆ ၂၀၀၆-၂၀၁၂...
Golf CC အတွက် Android system dvd radio Magotan / Caddy / Passat / Sagitar / Tiguan / Touran / Jetta / ထိုင်ခုံ / CC ကို / ပိုလို ဂေါက်သီး / ဂေါက်သီး5/ ဂေါက်သီး ၆...
VW TOUAREG 2010-2014 အတွက် Android carplay အလိုအလျောက်သွားလာမှု
VW TOUAREG 2010-2014 အတွက် Android carplay အလိုအလျောက်သွားလာမှု အသွင်အပြင်: ၁) နောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 octa core system၊ 4GB RAM နှင့် 32GB ROM ပါ ၀ င်သောအဆင့်မြင့် Rockchip PX5 ပရိုဆက်ဆာ၊...
TOUAREG 2015 2016 အတွက် Android 9.0 In-dash dvd
TOUAREG 2015 2016 အတွက် Android 9.0 In-dash dvd အသွင်အပြင်: ၁) နောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 octa core system၊ 4GB RAM နှင့် 32GB ROM ပါ ၀ င်သည့်အဆင့်မြင့် Rockchip PX5 ပရိုဆက်ဆာ၊...
PASSAT 2015 အတွက် Android ကားစတီရီယိုဘလူးတုစက်
PASSAT 2015 အတွက် Android ကားစတီရီယိုဘလူးတုစက် အသွင်အပြင်: ၁) နောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 octa core system၊ 4GB RAM နှင့် 32GB ROM ပါ ၀ င်သည့်အဆင့်မြင့် Rockchip PX5 ပရိုဆက်ဆာ၊...
Golf7အတွက် Android system dvd gps
Golf7အတွက် Android system dvd gps အသွင်အပြင်: ၁) နောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 octa core system၊ 4GB RAM နှင့် 32GB ROM ပါ ၀ င်သည့်အဆင့်မြင့် Rockchip PX5 ပရိုဆက်ဆာ၊...
VW တစ်လောကလုံးအတွက်ကားမာလ်တီမီဒီယာအညွှန်းစနစ် ဤယူနစ် VW ကားတစ်စီး၏မာလ်တီမီဒီယာလမ်းညွှန်စနစ်သည် Bluetooth ခေါ်ဆိုမှု / အသံဖွင့်ခြင်း၊ ထပ်တူပြုခြင်းဖုန်းစာအုပ်၊ ပြင်ပမိုက်ကရိုဖုန်းတို့ကို ထောက်ပံ့သည် ။ VW universal car multimedia navigation system သည်...
တရုတ်နိုင်ငံ Volkswagen ကအန်းဒရွိုက်ကား DVD ပေးသွင်း
Volkswagen ကအန်းဒရွိုက်ကား DVD Player ကို
, သင်တို့အဘို့လွယ်ကူပြီးချောမွေ့စွာအင်တာနက် access ကို browser ကိုအင်တာနက်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုများ watch, သင့်အီးမေးလ်စစ်ဆေးအခမဲ့အွန်လိုင်းမြေပုံနှင့်အတူဂိမ်းကို download apps များ, ဒါမှမဟုတ်ပင်အညွှန်း play, ကုန်ကျစရိတ်: 1. Volkswagen ကအန်းဒရွိုက် 4.4 ကား DVD မျှဝေ WIFI ဟော့စပေါ့ In-Bulit နိုင်ပါတယ် အခမဲ့အွန်လိုင်းမြေပုံနှင့်အတူ -effective: သင်ထိုကဲ့သို့သောအခမဲ့များအတွက် Google မြေပုံ IGO, Sygic နှင့် Waze အားမြေပုံအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအွန်လိုင်းမြေပုံများအားအလွယ်တကူဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Google ကမြေပုံနှင့်အတူ, သင်အရှိဆုံးတိကျမှုနှင့်ကို up-to-date ဖြစ်အောင်လမ်းကြောင်းများ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအသွားအလာဒေတာနှင့်ပိုပြီးရနိုင်။
2. သင့်ရဲ့လမ်းတစ်ဝှမ်းပိုမြန်လွယ်ကူမည်သည့်အခါမျှရှာပါ။ လွယ်ကူသော-connected အင်္ဂါရပ်ကိုထောကျပံ့: android စမတ်ဖုန်းနှင့် devices များနှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့, အလွယ်ကူသော-connected အင်္ဂါရပ်သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းများနှင့်ကားကိုဦးခေါင်းယူနစ်များအကြားနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်မှုနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာလိုအပ်သည့်အပိုမရှိဆော့ဗ်ဝဲနဲ့, ကို USB မှတဆင့်ယူနစ်ရန်သင့်စမတ်ဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်တွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ပြောင်းလဲနေသောနောက်ခံ: ပြောင်းလဲနေသော backgrouds ရရှိနိုင်ပါ။ ဖောက်သည်လည်းနောက်ခံအဖြစ်၎င်းတို့၏ရုပ်ပုံများကိုသုံးနိုင်သည်။ universal ကားတစ်စီး DVD စတီယာရင်ဘီးထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့နိုင်သည်, လာမယ့်သီချင်းမှ skip volume ကို adjust သို့မဟုတ်အခြားရုပ်သံလိုင်းအကူးအပြောင်း, အပေါငျးတို့သစတီယာရင် whell ပယ်သင့်လက်ကိုယူစရာမလိုဘဲ, သင့်ခရီးလုံခြုံနှင့်ပိုပြီးပျော်စရာအောင်။ Volkswagen ကအန်းဒရွိုက်ကား DVD dashcams တို့နှင့်လည်းလိုက်ဖက်တဲ့: အချိန်မရွေးဘယ်နေရာမှာမဆိုသင့်ရဲ့ခရီးကိုအသံဖမ်း။ ကားမောင်းပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်လုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။
3. Volkswagen ကအန်းဒရွိုက် 5.1 ကား DVD အများအပြားကားတစ်စီးတပ်ဆင်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ် Volkswagen ကအန်းဒရွိုက် 6.0.1 မော်တော်ကား DVD: စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ android 6.0.1 system.The စနစ်၏ optimized မှတ်ဉာဏ်စီမံခန့်ခွဲမှုမှတဆင့်များနှင့်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်စွမ်းရည်တစ်ခုမကြုံစဖူးအစာရှောင်ခြင်းနှင့်တိကျမှုအဆင့်အထိယူဆောင်ခဲ့သည်။ သငျသညျဝဘ် browsing စဉ်အကြိုက်ဆုံးသီချင်းစာရင်းများ engjoy, ဒါမှမဟုတ်ချောချောမွေ့မွေ့အဆိုပါ lastest ပြိုင်ကားဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ်။
Volkswagen ကအန်းဒရွိုက်ကား DVD Volkswagen ကအန်းဒရွိုက် 4.4 ကား DVD Volkswagen ကအန်းဒရွိုက် 5.1 ကား DVD Volkswagen ကအန်းဒရွိုက် 6.0.1 မော်တော်ကား DVD